Imvume kanye nentsha | Isisekelo Semivuzo: Uthando, Ubulili kanye ne-intanethi
Ikhaya The Law Isivumelwano nabaselula
Udaba lokuvuma ucansi kanye nentsha luyinkimbinkimbi.
Iminyaka yokuvuma kwanoma yiluphi uhlobo lwezenzo zocansi yi-16 kulabo besilisa nabesifazane, ukuze noma yimuphi umsebenzi wezocansi phakathi komuntu omdala nomunye ngaphansi kwe-16 kuyicala lobugebengu. Iminyaka yemvume ifanayo kungakhathaliseki ukuthi ubulili noma ubulili bobulili.
Ukulala ngokocansi (ubulili, isilwane) kanye nobulili bomlomo phakathi kwabantu abasha abaneminyaka engu-13-15 namacala, ngisho noma bobabili abalingani bevuma. Ukuzivikela okungenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi omunye wabalingani bakholelwa ukuthi omunye u-16 noma ngaphezulu.
Kukhona ukuzivikela okungenzeka uma umsebenzi wezocansi ungahileleki ngokobulili obungenayo noma okhuluma ngomlomo. Lokhu kungukuthi umuntu omdala ukholelwa ukuthi umuntu osemncane uneminyaka engu-16 noma ngaphezulu futhi abazange bakhokhiswe ngaphambilini icala elifanayo, noma umahluko wonyaka ungaphansi kweminyaka emibili.
Isiqondiso esivela kuHulumeni waseScotland uyavuma ukuthi akuwona wonke amacala okwenza ucansi ngaphansi kwe-16s ezoba nokukhathazeka kokuvikela izingane, kepha abantu abasha bangase babe nesidingo sokusekelwa ngokuphathelene nokuthuthukiswa kocansi nobuhlobo babo.
Lokhu okuncane ividiyo mayelana nemvume ezindabeni zocansi. Ingasetshenziselwa ukuvula ingxoxo ngale ndaba ebalulekile. Ngenkathi abanye abantu becabanga ukuthi ingxoxo ngocansi kufanele yenzelwe abazali bodwa, kunendima ebalulekile ezikoleni okumele ziyidlale ikakhulukazi ekufundiseni isayensi ngemuva komthelela wezithombe zocansi. Abazali badinga ukuhlala bencane ngokwenzekayo kule ndawo futhi baxoxe njalo nezingane zabo ngakho. Abazali bayizibonelo eziyinhloko nezibalo zegunya empilweni yanoma iyiphi ingane, noma kunjalo babonakala behlubukile.
Ukuvunyelwa emisebenzini yezocansi kuyindaba ebucayi kakhulu, ikakhulukazi phakathi kwentsha kanye nentsha esemncane. Wonke umuntu ukhuluma ngocansi futhi abaningi bancintisana omunye nomunye ukuze babone ukuthi ubani ozokuqala ukuzama imisebenzi emisha. Ukufinyelela okubanzi kwezithombe zobulili ezingcolile nge Smartphones kanye amaphilisi kusho ukuthi abantu abasha bafunda ngocansi kanye 'uthando' kusuka commercial abenza porn ngendlela abazali abaningi bangathola abanozondayo. Izithombe zobulili ezingcolile namuhla azifani nomsuka ophansi Uhlobo lwe-Playboy omagazini besikhathi esidlule. Udlame, ukuhlukunyezwa nokuhlukunyezwa ngokocansi kwabesifazane noma abesilisa besifazane kuyinsakavukela okungenani kuma-90% wamavidiyo atholakala mahhala. Ukubukwa kwansuku zonke kwalolu daba iminyaka ngaphambi kokuhlangana nomuntu wangempela kungasonta ngokujulile ukuqonda kwentsha, owesilisa noma owesifazane, mayelana nokuthi yini ephephile, enothando, nobulili obuvumayo.
Girls bafuna ukuthandwa, babonwe njengokukhangisa ngokobulili futhi ngokuvamile bavulekile ukuthanda. Lokhu akusho ukuthi sebekulungele ukwenza ucansi. Bafunda nje ukuthi bangabhekana kanjani nemizimba yabo ephethe ucansi. Njengoba bezama futhi bezama ukubukeka okusha nokuziphathisa, bangabonakala befana nabantwana. Ukufunda ngemingcele nokwenza amaphutha kuyinto evamile yokufunda mayelana nokuxhumana. Omunye wesifazane osemusha oneminyaka engu-16,
"Angazi ukuthi ngikufunani. Ngifuna nje ukuthandwa ... Ngifuna ukuzama lokho abanye abakhuluma ngakho futhi bathi bakwenzayo. "
Uthe futhi uphoqelelwe ukuthi enze izenzo zocansi abezisola ngazo ngemuva kwalokho. Akafuni ukuphoxa njengesikhova. Amantombazane amaningi acabanga ukuthi “akunanhlonipho” ukumisa umfana ngemuva kokuba eseqale 'ukusondelana nobuntu bakhe'. Abesifazane bayo yonke iminyaka badinga ukufunda ukuthi bazimisele kanjani futhi babeke imingcele ecacile mayelana nokuthi bakhululeke ukwenzani.
Boys Ngakolunye uhlangothi unamandla lamandla obulili afuna ukuhlola drive nomlingani. Bafuna ukubonakala njengamadoda langempela emehlweni abanye abesilisa. Bangakwazi ukuzimisela futhi abanomqondo ongenayo mayelana nokufeza lezo zinhloso. Ukuthembeka eqenjini lesilisa kuvame kakhulu kunesifiso sokuqhathanisa izibopho noma ukubambisana nentombazane. Bafunda ukulawula lelo gciwane elisha lezocansi emzimbeni wabo futhi. Bajwayele nokwenza amaphutha amakhulu esahlulelo ngalokho umlingani ovuma ngempela.
Ngakho-ke nakuba izidumbu zingase zishintshane, zingabonakali, izibonakaliso zobulili, akusho ukuthi umqondo womuntu ngamunye ulungele ukuhlanganyela nobulili ngesilinganiso esifanayo nesinye. Futhi akuyona njalo owesilisa onamandla amakhulu, abesifazane abaningi bahola ekuqaliseni ukuziphatha ngokobulili. Yilapho izinkinga ezibucayi zemvume, izame ukudlwengula nokudlwengula.
Ukufundisa abantu abasha mayelana nokuxhumana kwezimo eziseduze kubalulekile ekuthuthukiseni ukuthuthukiswa kocansi okunempilo.
Lona ngumhlahlandlela jikelele kumthetho futhi awusenzi iseluleko sezomthetho.